Root sy fanarenana amin'ny Samsung Galaxy S3 Mini | Androidsis
Amin'ny lahatsoratra manaraka dia hanolotra fitaovana ho anao aho "rehetra terrain" izany dia ho lasa ilaina amin'ny antsika Samsung Galaxy S3 Mini.
Ity fitaovana ity, Samsung Galaxy S3 Mini Toolkit, dia manan-kery ho an'ny maodely rehetra an'ny Samsung Galaxy Mini, na dia natao ho an'ny maodely iraisam-pirenena fantatra amin'ny hoe GT-I8190, Ka ho an'ireo maodely hafa dia mitovy ny fizotrany, inona no fanovana amin'ny dingana hisafidianana ny maodelin'ny terminal.
1 Fa maninona isika no te-faka ary hametraka ilay fanovana nohavaozina?
2 Ahoana ny famongorana sy fametrahana ny fanarenana voaova amin'ny modely Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8190.
Fa maninona isika no te-faka ary hametraka ilay fanovana nohavaozina?
Miaraka amin'ny fidirana amin'ny faka Hanana ny fifehezana ny terminal iray manontolo isika hanao sy hanafoanana araka izay tiantsika, toy izany koa azontsika ampiasaina fampiharana manokana, mazàna mba hanatsarana ny rafitra, izay mila alalana superuser hiasa tsara.
Etsy ankilany dia ny fanarenana voaova ahafahantsika manao zavatra manan-danja toy ny famerenana ny rafitra fiasa miasa manontolo, (nandroid Backuo), ary ny angonao rehetra romana nandrahoina ary nohatsaraina ho an'ity terminal Samsung manaitra ity izay nanararaotako nosedra manokana nandritra ny andro vitsivitsy ary tena nahasarika ahy tanteraka izany.
Ahoana ny famongorana sy fametrahana ny fanarenana voaova amin'ny modely Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8190.
Ity programa na fitaovana ity dia manan-kery ho an'ny rafitra fiasa mifototra amin'ny Windows.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ilay fitaovana Samsung Galaxy S3 Mini ToolKit Avy amin'ity rohy ity, raha vao sintonina izahay dia manatanteraka azy ary manome alalana amin'ny mpitantana raha mangataka aminay izy ireo.
Ny fizotry ny fametrahana dia tsotra toy ny fanindriana ny bokotra Manaraka, Manaraka, Manaraka ary farany akaiky.
Vantany vao vita izany rehetra izany, dia hovonoina ho azy izy io, mampiseho amintsika ny efijery lehibe izay hisafidianantsika ny maodelin'ny terminal antsika, amin'ity tranga ity Samsung Galaxy S3 Mini modely GT-I8190.
Tsy maintsy misafidy amin'ny fanaraha-maso ny safidy isika 11 na 12 miankina amin'ny kinova Android izay napetrakay, 4.1.1 o 4.1.2.
Ny programa dia hametraka izay ilaina mba hahafahana miasa araka ny tokony ho izy android version napetrakay, raha vantany vao vita ny varavarankely toa ity manaraka ity dia haseho:
Ankehitriny ny zavatra voalohany hataontsika dia misafidy ny Safidy 1 hametraka ny mpamily ilaina amin'ny programa mba hahafantarana ny fitaovantsika.
Afaka manao izany rehetra izany isika fa tsy mila mampifandray ilay Samsung Galaxy S3 Minizaho, mampahatsiahy anao fa alohan'ny hampifandraisana azy amin'ny solosaina dia tokony hampavitrika isika Famafana USB avy amin'ny menio fipetrahana terminal.
Raha vantany vao tafapetraka ny mpamily dia atoro anao izany Atsaharo ny solosainao mba hamita soa aman-tsara ny fametrahana.
Amin'ny dingana manaraka dia hampifandraisinay ny Samsung Galaxy S3 Mini modely GT-I8190 amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny tariby USB misy azy ary hisafidy ny isa laharana 2 isika hanongotra ny terminal.
Amin'ny efijery manaraka dia fidintsika safidy laharana 2 indray
Rehefa vita ny asany ny programa ary manomboka indray ny terminal dia hananantsika izany miorim-paka ary miaraka aminy Busybox nametraka.
Miverina amin'ny efijery lehibe amin'ilay programa izahay izao ary mifantina safidy laharana 5 hametraka ny Fanarenana voaova izay tena tianay indrindra, raha tsy fantatrao izay ho voafantina, dia amporisihinay ny ClockWorkMod Recovery, CWM, izay mora ampiasaina indrindra ho an'ireo mpampiasa tsy za-draharaha.
Rehefa vita ny fizotrany dia efa vonona ny terminal romana nandrahoina avy amin'ny fanarenana vaovao napetraka.
Afaka andro vitsivitsy dia hanome torohevitra vitsivitsy aho ny romana tsara indrindra izany dia efa ao anatin'ny dinika fampandrosoana samy hafa Android, ary hanolotra asa vaovao tsy tapaka hitranga aho, koa araho izany Androidsis.
[wpv-view name = »Vokatra mifandraika»]
Fanazavana fanampiny - Samsung Galaxy S3 mini Review
Misintona - Samsung Galaxy S3 Mini ToolKit
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » Samsung Galaxy S3 Mini, ny fomba famongorana sy fametrahana CWM na TWRP fanovana fanovana
Azafady namako, ahoana no hametrahako ny maodelin'ny telefaona?
Ho hitanao ao amin'ny Settings / momba ilay fitaovana ny maodely
Tamin'ny 28/05/2013 21:13 PM, «Disqus» nanoratra:
Azafady namako rehefa mivoaka fanindroany ny safidy 2
1) superuser 3.1.3 amin'ny chainDD
2) supersu 1.25 amin'ny chanfire (Recommended)
Safidio ny safidy 2 ary raha tsy mandeha izy dia andramo ny 1
Tamin'ny 29/05/2013 02:26 PM, «Disqus» nanoratra:
-roller dia hoy izy:
Amin'ny onjan'i Francisco, ny fanontaniako dia ny mampifandray ny telefaona mivantana fotsiny aho sa tsy maintsy mampifandray azy amin'ny alàlan'ny fametahana azy miaraka amina fanalahidy vitsivitsy rehefa mamelona azy io, tiako ianao raha mamaly ahy haingana araka izay azo atao ianao, misaotra sy kedo miandry ny valinteninao, arahaba. Manana ny kinova iraisam-pirenena GT-i8190 aho
Mamaly an'i curl
YENDEZ GREGORIO dia hoy izy:
NAMANA NY CELL-ko SAMSUNG S3 MINI I8190, nametraka fanarenana 2.4.8 FA nametraka izany tamina APP FLASHING IZAO ARY IZAO TSY Avelako hanafoana ahy ireo famerenana ireo izay tadiaviko hanova ny ROM ary hametraka izany amin'ny lesoka avy eo tadiaviko. HAMERINA NY VERSION ORIGAL NY FRIMWARE ARY ATOKO AZY FA TSY VOAFOHA TSY MBOLA HALALAKO IZAO AMIN'NY SCREEN BLACK
Valio amin'i YENDEZ GREGORIO
hey namana ailikiliko ny odin inona no ataoko ???
Inona no dikan'ny hoe nitsambikina ianao?
Nofongarako ny safidy roa an'ny mpampiasa super ary azoko tsara ny findaiko niaraka tamin'ilay sary famantarana Android izay milaza fa aza mihazakazaka lasibatra ary nivoaka tamin'ny pc nametraka mpamily aho rehefa efa nampidina azy ireo ary nisokatra ny fanampiana odin
ampio namana tsy handao ahy toy izao
Marjorie dia hoy izy:
Salama, manana Samsun Galaxy S3 mni GT-I8190L aho. Rehefa avy nifidy ny fitaovana ampiasaiko aho, izay ho 32 ... dia mahazo efijery iray milaza aho fa tsy hita ny Source 1. Fa inona izany? Tsy afaka manohy ireo dingana hafa aho
Mamaly an'i Marjorie
Ny rootGT-I8190 dia tsy mahazo ahy amin'ny toerana ahazoako azy amin'ny programa sasany na avy aiza….
Ary ny tapany voalohany dia azo atao, raha te-ho faka fotsiny aho na tsy misy zavatra hafa.
Mazava ho azy, namana, apetraho ireo mpamily ary safidio ny root root.
Ny zavatra misintona dia nijanona teo amin'ny efijery finday… aza vonoina ny kendrena !!, Elaela, firy na firy na vitsy ny faharetany? ampio azafady, misaotra
maxy dia hoy izy:
Tsy feno ny fampahalalana, manaraka ny dingana rehetra aho ary manokatra ny odin, ahoana no hataoko ?? .. misaotra
Mamaly an'i maxy
Lex ander dia hoy izy:
Ao amin'ny Odin dia mila manamarina ianao fa ny safidy Auto Reboot sy F. Reset Time dia alefa, avy eo tsindrio ny bokotra milaza fa PDA ary eo ianao dia tsy maintsy mitady rakitra izay novokarin'ny programa (jereo ao amin'ny folder izay nametrahana ny programa , amin'ny ankapobeny dia »C: Samsung Galaxy S3 Mini ToolKitrootGT-I8190L» ao no tokony hisafidiananao ilay rakitra «boot-insecure-amb1-recovery-GTI8190L.tar» (mety miovaova izany, saingy ny teny «fanarenana» no fantatrao). ary tsindrio ny Start… Zahao ity horonan-tsary ity, manazava tsara !! http://youtu.be/dO2O6HMQirc
Valiny tamin'i Lex Ander
Salama, tolak'andro tsara, manandrana mametraka ny toolkit aho ary manome ahy ity lesoka manaraka ity aorian'ny fametrahana azy, ity ihany no miseho: manomboka ny adb daemon fa tsy mandeha. manomboka azy izao amin'ny fizarana 5037
daemon dia nanomboka soa aman-tsara
Monkeyr530 dia hoy izy:
Tsy maintsy apetrakao ireo fonosana ADB hahafahana mampandeha programa amin'ny alàlan'ny usb eo anelanelan'ny pc sy ny finday, ity ny rohy:
Giovanni Zeceña dia hoy izy:
Salama e! Manana ny kinova GT-I8190L aho, mila misafidy safidy 12 na 32 amin'ny menio ve aho? ampio aho azafady!
Valiny tamin'i Giovanni Zeceña
tsy misy faka dia hoy izy:
misy inona, ha? aorian'ny fanandramana 3 dia tsy misy fidirana root, cwm ok, root no
Mamaly tsy misy faka
Salama, manana Galaxy minis3 gt-i8190n aho, azoko atao ve ny mametraka ny kinova rindrambaiko an'ny maodely iraisam-pirenena?
Mba fisaorana fotsiny ny tutorial, dia niasa tamin'ny gt-i8190l
Tsy nanaiky ny cwm mihitsy aho rehefa nosokafan'i odin, tsy nivonona sy maitso mihitsy izy io, izay mety tsy nahomby tamiko_
Mamaly fiara mandeha
Tena tsara nanompo ahy be dia be
Rehefa te hametraka cwm amin'ny odin aho dia tsy nivadika maitso ary nanamarika ahy hoe tsy nahomby. .. Nanandrana twrp aho ary nahazo zavatra mitovy. .. inona no azoko atao izao?
Cao Sodes dia hoy izy:
Mila manana bateria voadidy tsara ianao ...
Mamaly an'i Cao Sodes
anjely kely sandoval dia hoy izy:
raha 50% dia ampy ahafahana faka
Mamaly an'i angelito sandoval
Salama, manana S3 mini GT-I8190N 4.1.2 Baseband I8190NXXAMG6 fototra tsy hita ao anaty lisitra hisafidianana aho, iza no fidiko?
Roger orozco dia hoy izy:
Azoko atao ve ny mamaly ahy azafady;)… sendra namaka ny findaiko aho, saingy tsy haiko raha mirehitra ny fanarenana ary tsy hitako ny mamelona azy, manana ny famerenana amin'ny laoniny 6.0.2.7 aho ary izaho tsy mahay mamily azy .. misaotra mialoha!
Valiny tamin'i Roger Orozco
Luis Eduardo del Hoyo dia hoy izy:
Salama rahalahiko manana olana aho. NY SUPERSU INDRAY NAPETRAKA DIA NOSARITSAKA AZY TSARA IZAO AZY FA NY ANDRO iray rehefa manandrana mamadika azy dia eo am-panombohana sary fotsiny (Milaza i SANSUNGALAXY S3 MINI) ARY DE HAY TSY MAMPANDROSO INDRINDRA IZAO. Azoko atao ny miditra ao amin'ny menus système amin'ny alàlan'ny fanindriana (VOLUME LEHIBE INDRINDRA, FANOMPOANA ary bokotra mahery) ary tsy haiko hoe inona no hanampy azy io, raha azonao atao ny manampy ahy. Misaotra betsaka anao aho
Valiny tamin'i Luis Eduardo del Hoyo
Sergio Javier dia hoy izy:
Nanompo ahy tonga lafatra! Misaotra betsaka anadahy. Efa nanandrana ny fomba hitako rehetra aho fa tsy nanaiky ny TWRP ny finday. Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara. Fiarahabana avy any Caracas - Venezoelà
Valiny tamin'i Sergio Javier